Xaraashka kumbuyuutarka → Dawaarka kumbuyuutarka / dharka P&M
Daabacaadda kumbuyuutarku waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee lagu calaamadeeyo dharka iyo dharka. Waxay u sabab tahay taariikhdeeda oo soo jirtay boqollaal sano, halkaas oo waagii hore haweenku qaabab gacmeedyo gacmeed ay ku toli jireen
Maalmahan, daabacaadda waxaa si otomaatig ah loogu adeegsadaa iyadoo la adeegsanayo mashiin kumbuyuutar lagu xakameynayo oo ku saleysan barnaamijka daabacaadda, kaas oo si shaqsi ah loogu sameeyay naqshad sawir kasta.
Naqshadeynta yaryar ee dharka oo leh culeys ka weyn kan funaanad dhaqameed ayaa sifiican ufiican. Dharka shaqsiyeed wuxuu leeyahay faa iidooyin badan. Shayga noocan oo kale ah ayaa ka muuqda tartanka, wuxuu xoojinayaa muuqaalka shirkadda wuxuuna dhisayaa dareenka bulshada ee kooxda dhexdeeda marka laga hadlayo dharka shaqada.
Xaraashka kumbuyuutarka waxaa lagu sameeyaa dharka iyo dharka
Dahabka kumbuyuutarka ayaa si geesinimo leh loogu isticmaali karaa soo saarista aaladaha dharka dharka xayeysiinta. Astaanta xiran iyo magaca shirkadda on polówkach, bacaha ama shukumaano waxay hadiyad wanaagsan u noqon kartaa macaamiisha ama shuraakada ganacsiga. Iyagoo adeegsanaya dharka noocaas ah ama waxyaabaha xayeysiinta ah, waxay horumarin doonaan sumadda.
Dharka ka sokow, daabacaadda waxaa inta badan lagu sameeyaa alaabada sida bacaha, koofiyadaha, tuwaalada iyo dharka qubeyska. Astaanta daabacan ayaa xaqiiqdii ka xoog badan kana adkaysi badan dhiig-miirashada marka loo eego habab kale oo lagu calaamadeeyo iyadoo la adeegsanayo sawirro sawir leh
Dhaqanka daabacaadda kombiyuutarka
Xabsi waa hab lagu qurxiyo oo loo yiqiin xilliyadii hore, marka dumarku qaababka gacanta lagu xardho ee dharka, marada miiska iyo calanka. Xarrago iyo adkaysi daabacadeed ayaa ka dhigtay cunsur dhaqammo badan, iyo sidoo kale astaan ​​gobollada qaarkood u ah qaab dharka dadka iyo boorarka.
Tayada sare iyo adkeysiga calaamadeynta daabacaadda ayaa sidoo kale laga helay codsi ku saabsan xayeysiinta casriga ah. Shaqaalaha xidhan dharka ay ku qoran tahay astaanta shirkaddu waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin wakiillo ka socda shirkado lagu kalsoonaan karo oo aan magacyadooda la aqoon. Sidoo kale dharka hudheelka oo ah qaab shukumaanno ama dharka lagu qubeysto oo leh astaan ​​ayaa kordhinaya haybadda hudheelka.
Waardiyeyaasha iyo maqaayadaha ku qalabeysan dharka shakhsi ahaaneed ee loo yaqaan 'gastronomic textiles' sida macawisyada ama macawisyada ayaa sidoo kale loo arkaa inay la jaan qaadayaan astaanta, sidaas awgeedna waxay dhiirrigelinayaan kalsooni weyn, taas oo inta badan loo beddelo go'aammada iibsashada macaamiisha. Tummaan ayaa sidoo kale xayeysiinta qalabka in si togan loo helay.
Qalabka lagu qurxiyay oo isugu jira boorsooyin, koofiyado, funaanado ayaa badanaa loo isticmaalaa tartamada ay abaabulaan shirkaduhu iyada oo qayb ka ah dhiirrigelintiisa ama bilaash ahaan macaamiisha.
Baarkinka mashiinka loogu talagalay daabacaadda kombiyuutarka
Tiknoolajiyadda casriga ah iyo fursadaha hadda jira ayaa noo oggolaanaya inaan la kulanno baahida sii kordheysa ee suuqyada ee alaabooyinka leh daabac. Thanks to mashiinnada casriga ah, maanta waa suurtagal in la sameeyo kumanaan xarig oo muddo gaaban ah adoo ilaalinaya saxsanaanta naqshadeynta. Horumarkan dhaqaale ayaa sidoo kale loo tarjumay qiime soo jiidasho leh oo daabac leh.
Xaraashka kumbuyuutarka - farsamada gacanta
Mashiinnada casriga ahi waxay ka kooban yihiin cirbado fara badan oo lagu dhejiyo midabada dunta ku habboon mashruuca. Nidaamka daabacaadda waxaa maamula barnaamijka kumbuyuutarka kaas oo naqshadeynta loo soo dhejiyo. Dhinaceena ayaynu ku jirnaa si loo go'aamiyo meesha ku habboon ee lagu dhejiyo daabacaadda iyo cabbirkeeda. Dawaarka waxaa lagu talinayaa mashaariic yar yar, sidaa darteedna waxay caan ku tahay daabacaadda astaamaha, magacyada shirkadaha, hay'adaha iyo dugsiyada.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada daabacaadda kombiyuutarka
Muuqaalka dharka leh astaamaha waa wax ka dhigaya mid muuqda. Xaraashka si sax ah loo sameeyay wuxuu siinayaa dharka dhar tayo iyo xarrago leh, sumadda uu xayaysiiyayna wuxuu ku kasbaday sharaf. Looma baahna in laga walwalo in sawirada ama qoraalka ay ka soo bixi doonaan dhaqida ama mudo dheer kadib isticmaalka.
Daabacaadda kumbuyuutarku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dharka, taas oo ka siisa faa'iido weyn hababka kale ee ka soo baxa ama u sameeya daloollo si tartiib tartiib ah u jajabinaya. Dawaarka kumbuyuutarku wuxuu noqon karaa midab kasta. Xaddidaadda kaliya waa midabka dunta la adeegsaday.
Tuminta waxaa lagu sameeyaa qalliin sax ah iyada oo ay ugu wacan tahay xakamaynta kumbuyuutarka. Farsamada iyo saxsanaanta shaashadda kumbuyuutarka ayaa u oggolaanaysa xallinta sare ee qaababka daabacan. Dahabka ayaa si fudud loogu bixiyaa tiro badan.
Faa'iido dheeri ah ayaa ah qiimaha hal-mar ee diyaarinta barnaamijka daabacaadda, kaasoo weli ku jira keydkeena macluumaadka si wanaagsan. Sidaa darteed, mustaqbalka, haddii macaamilku ku laabto inuu dib u dalbado dhar isku naqshad leh, waa laga dhaafi doonaa khidmadda barnaamijka.
Xaraashka kumbuyuutarka ayaa sidoo kale leh faa'iido daro, laakiin waa looga hortagi karaa iyadoo la xusho habka calaamadeynta habboon ee nooca maaddada iyo naqshadeynta. Tani waa sababta laguugula talinayo inaad laxiriiraan xirfadleyda kahor intaadan bilaabin calaamaddaada koowaad si aad uga fogaato cilladaha iman kara.
Ka soo horjeedda daabacaadda dusha sare ee kombiyuutarka, daabacaadda looma isticmaali karo in lagu tolo garaaf dhammaystiran oo leh midabbo aan xad lahayn.
Si kastaba ha noqotee, tani maahan waxa ay ku saabsan tahay. Dahabku wuxuu tixraac u yahay dhaqanka maxaa yeelay waxay u egtahay jaakadaha hubka qurxinta dharka sharafta leh. Wax shaqo ah kuma laha xirmooyinka jilicsan ee la dhaqi karo.
Kabax laguma talinayo in lagu xardho alaab gramageedkiisu hooseeyo oo aan ka badnayn 190 g / m2. Xaraashka ballaadhan ayaa bixin doona aragti ah "gaashaan", waxay noqon doontaa mid aan dabacsanayn inta lagu jiro isticmaalka, iyo marka lagu dabaqo maaddo khafiif ah - cirbadaha ayaa laga yaabaa inay dalooliyaan wax khafiif ah.
Immisa ayey ku kacaysaa daabacaadda kumbuyuutarka?
Daabacaadda kumbuyuutarka ayaa yar dhaqaale. Si kastaba ha noqotee, dhowr arrimood ayaa door ka ciyaara qiimeynta saxda ah. Shakhsi ahaan, daabacaadu way ka jaban tahay markaad dalbanayso alaabooyin badan. Intaas waxaa sii dheer, cabbirka daabacaadda iyo kakanaanta muuqaallada ayaa saameyn ballaaran ku leh qiimaha, taas oo u tarjumeysa qiimeynta cufnaanta daabacadda. Baaxadda ballaadhku, inta laalaab badan, isku-darka iyo cabbirka weynaanayaa, ayaa daabacaadu ka sii cufan tahay. Sidoo kale, tirada meelaha la rabo in lagu dhejiyo daabacaadda (tusaale ahaan astaanta hore ee xabadka bidix + astaanta dhexda dambe) waxay muhiim u tahay qiimeynta cutubka. Qiimaha badanaa saameyn kuma laha tirada midabada la isticmaalay, maaddaama mashiinka tolidda uu leeyahay dunyo badan. Kharashka diyaarinta waa in lagu daro amarka daabacan ee ugu horreeya barnaamijka daabacaaddataas oo horey ugu jirtay keydkeena macluumaadka sidaasna aan loogu darin amarrada dambe.
daabacaadda kumbuyuutarkadaabac dharkaT-shaati oo leh daabacT-shaati oo leh astaandhar astaan ​​lehdhar ku qoranPolocalaamadeynta daabacaadda funaanadahadharka calaamadeynta dharka oo leh astaan